Qaababka safarka cusub: Kharashaadka safarka oo sii kordhaya iyo socdaalayaasha aan la tallaalin
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Qaababka safarka cusub: Kharashaadka safarka oo sii kordhaya iyo socdaalayaasha aan la tallaalin
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kirada baabuurka • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Safarku wuxuu noqonayaa mid qaali ah oo aan la hubin sidii hore, sida lagu sheegay cilmi -baaristii ugu dambeysay.
Kharashka safarka ayaa kordhay $ 330 safarkiiba sababtuna tahay shuruudaha gelitaanka ee la xiriira COVID-19.
Boqolkiiba 58 dadka Mareykanka ah ee u safray dibadda xagaagan lama tallaalin, sida lagu sheegay cilmi baarista.
47% millenniyadu waxay diideen inay safraan sababtuna waa kharash aad u badan, halka 25% ay ka baqeen inay la safraan carruur aan la tallaalin.
Siddeed iyo toban bilood ka dib markii uu bilaabmay cudurka faafa ee coronavirus, dalalku waxay dib u fureen xuduudaha dadka safarka ah. Sahan dhowaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday isbeddello cusub oo socda oo soo ifbaxaya, iyadoo socdaalku noqonayo mid ka qaalisan oo aan la hubin sidii hore.
Sahanku wuxuu falanqeeyay xogta in ka badan 3,500 oo socotada ah oo u safray dibadda si ay u fahmaan qaababkaan cusub ee socdaalka ee ka dhex jira dadka Mareykanka ah.
Kharashka safarka ayaa kordhay $ 330 safarkiiba sababtuna tahay shuruudaha gelitaanka ee la xiriira COVID-19, sidoo kale waxaa jira hubaal la’aan, iyadoo 41% dadka safarka ah ay si firfircoon ugu lug leeyihiin bulshooyinka safarka ee la xiriira safarradooda.
Intaa waxaa dheer, 58% dadka socotada ah ee Mareykanka ah lama tallaalin, meelaha ugu badanna waa Mexico (37%), Giriiga (19%), Dominican Republic (12%), Bahamas (11%), iyo Aruba (13%), iyo Costa Rica (8%).
Natiijooyinka Sahanka Weyn
58% dadka Mareykanka ah ee u safray dibadda xagaagan lama tallaalin. Markii dalalku dib u fureen xuduudahoodii, socotada aan tallaalin waxay ku noqdeen qaababkii safarka ee la mid ahaa kii ka horreeyay COVID-19.
Socotadii hore ayaa kor u sii kacaya iyadoo rubuc ka yahay 50+. Isbeddellada kale ee dadka, 47% millenniyadu waxay diideen inay safraan sababtuna waa kharash aad u sarreeya, halka 25% ay ka baqeen inay la safraan carruur aan la tallaalin.
Florida waa xudunta socdaalayaasha aan la tallaalin: 20% dadka socotada ah ee Maraykanka ee aan tallaalin waxay ku nool yihiin Florida. 4-ta gobol ee ugu sareysa Mareykanka ee kiisaska firfircoon ee COVID-19 ayaa sidoo kale horseeday xirmada safarada ugu badan ee ka baxsan dadka Mareykanka ee aan la tallaalin. Florida ayaa ka mid ah dalxiisayaasha ugu badan ee aan tallaalin, waxaana ku xiga Texas, New York, iyo California.
Safarku waa mid aan waxtar lahayn: Safar kasta wuxuu ku qaataa wax ka badan 5 saacadood go'aaminta shuruudaha gelitaanka iyo buuxinta waraaqaha. Intaa waxaa dheer, 23% dadka socotada ah waxay yiraahdaan waxay la xiriireen midkood diyaaradahooda, hoteelkooda, ”ama madal safar si ay u fahmaan shuruudaha gelitaanka iyadoo ay diyaaraduhu wacaan waqtiyada sugitaanka ee socda saacadaha.
Caadiga ah ee Cusub
Sahankani wuxuu iftiiminayaa hababka aan fiicnayn ee ay dejiyeen dawladuhu. In kasta oo la fahmi karo in shuruudo jiraan si COVID-19 looga fogeeyo, waddamadu waa inay hagaajiyaan hannaanka. Markay dalalku raadinayaan dib-u-habaynta dalxiiska, waxay dhayalsadaan saamaynta nidaamyada degdegga ah, hufan iyo hababka cad ee si fudud loo fahmi karo.
Wadamadu waxay soo bandhigeen shuruudo kala duwan si loo galo, taasoo ka dhigaysa mid aad qaali u ah safarka intii hore. Celcelis ahaan, qiimaha dheeraadka ah wuxuu ku darayaa ilaa $ 330 socdaal kasta wuxuuna ka kooban yahay fiisooyinka COVID-19, caymiska safarka, iyo tijaabooyinka COVID-19. Intaa waxaa dheer, 79% dadka socotada ah waxay muujiyeen sida ay uga xun yihiin maqnaanshaha hoteellada & shirkadaha duulimaadyada ee ku saabsan kharashaadka dheeraadka ah ee safarka, kaliya markii dambe la ogaaday markii baajinta aysan ahayn ikhtiyaar.
Fiisaha COVID-19, oo sidoo kale loo yaqaan fiisaha caafimaadka, waa fiiso cusub oo socdaalayaashu u baahan yihiin inay helaan. Inkastoo ay yihiin kuwo elektaroonik ah, oggolaanshuhu ma aha mid degdeg ah. Masuuliyiintu waxay dib u eegaan codsi kasta; waxaa la soo gudbin karaa oo kaliya maalmo ka hor safarka mana aha lacag la'aan.